Imba diki inowanzo kuve nyowani yemaitiro uye yemazuva ano mararamiro esp kune aya mapfupi ekuhaya. Zvisinei nenzvimbo diki, mugwagwa wakamanikana, uye mini makamuri, kuchine dzimwe nzira shoma dzekuita kuti iratidzike yakajeka, yakakura, uye zvakanyanya kunaka. Nekuda kwekuganhurirwa kwakakura, isu tinofanirwa kusanganisa fanicha zvakanaka nemukati dhizaini, pa…
Ndeupi mubhedha watinowanzo tengera kuimba yekutandarira? Mhinduro yacho ndeye machira, dehwe, kana chero vamwe, inova sarudzo yekutanga yemhuri zhinji. Asi wakambonzwa here kuti inflatable masofa? Hongu, Zvinonzwika kunge zvisinganzwisisike uye zvisina kujairika kune vanhu vazhinji. Iyo inflatable sofa ine PVC, uye kumanikidza kuyerera gasi mumuviri.…
Kune akawanda akasiyana marudzi esofa ayo akaoma kusarudza kuti unopinda mumusha mutsva here kana kutsiva wekare. Asi ini ndinotenda ndicho chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza kusarudza muzviuru zvezvidimbu. Ndosaka ndichifunga kunyora chinyorwa ichi. Chinhu chimwe chete chandinoda kufamba famba fenicha…
MhedzisoKushongedza kwakapfava muhotera mweya wehotera yese. Iyo yakanaka dhizaini yekushongedza zvakapfava inogona kutora chinzvimbo mukusimudzira mhedzisiro kune imwe nhanho. Sofa hotera tsika inogadzira Baotian Furniture inokuudza nezve dhizaini dhizaini dhizaini, Kufananidza nemidziyo yakapfava. Chekutanga kusarudzwa kwemidziyo yehotera…
Hotera sofa tsika yekutenga nzira
Tinofanira kunge takagara muhotera panze. Tinonzwa here kuti sofa rakasiyana nesofa riri mumba medu? Kana iwe uchida kutenga pasofa repahotera, ungasarudza sei? Vamwe vatengesi vakabvunza mibvunzo yakadaro. Masofa emahotera zvigadzirwa zvisingaenderani. Zvemasofa masiko, haisi nyore seyakajairika kugadzirwa kwemabatch ...
Panguva imwecheteyo iyo yenyika yekurarama yakagadziriswa zvakanyanya, inoisawo zvakakwirira uye zvepamusoro zvinodikanwa pahunhu hwehotera nebasa. Naizvozvo, pakusarudza fenicha yehotera, mahotera makuru anotarisisa zvakanyanya kuita, runako, nyaradzo, ruzivo uye zvimwe zvinhu, uye isa kumberi zvinodikanwa kumakambani emidziyo yehotera. Iine ayo aesthetics ekugadzira uye epamusoro-magumo fenicha zvigadzirwa,…
Chii chinonzi kurara kwakanaka?
Nzira yekurara ine hutano inovimbisa zuva rinotevera rakazara nesimba esp yevakuru vanoshanda uye vanorema vadzidzi vadzidzi. Kurara hutsanana chiitiko chetsika chinotibatsira kuti tirare uye tigone kurara zvakanaka. Hutano hwekurara hutsanana hunogona kukanganisa kugona. Saka tichifunga kuti vanhu vazhinji havana hope dzakanaka tinovimba kuti pazasi zvidiki zvidiki zvinobatsira usati waenda kunorara.